Boeing waxay magacawday Madaxweyne kuxigeenka cusub ee howlaha dowlada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Boeing waxay magacawday Madaxweyne kuxigeenka cusub ee howlaha dowlada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Ziad S. Ojakli oo loo magacaabay inuu noqdo ku -xigeenka fulinta ee Boeing ee hawlaha dawladda
Ojakli wuxuu ku biirayaa Boeing ka dib markii uu ku guulaystay xirfado kala duwan doorka xiriirka sare ee dawladda caalamka ee warshadaha baabuurta iyo maaliyadda marka lagu daro u adeegidda maamulka Aqalka Cad ee Madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bush.
Ziad S. Ojakli ayaa loo magacaabay inuu noqdo Boeing oo ah madaxweyne ku xigeenka cusub ee fulinta hawlaha dawladda laga bilaabo Oktoobar 1, 2021.
Ojakli wuxuu hoggaamin doonaa dadaallada siyaasadda guud ee Boeing, wuxuu u adeegi doonaa madaxa u ololeeyaha, wuxuuna kormeeri doonaa Boeing Global Engagement.
Ojakli wuxuu hoos imaan doonaa Madaxweynaha Boeing iyo agaasimaha guud David Calhoun wuxuuna ka shaqayn doonaa Golaha Fulinta ee Boeing.
Shirkadda Boeing ayaa maanta Ziad S. Ojakli u magacowday inuu noqdo ku -xigeenka fulinta ee shirkadda ee hawlaha dawladda laga bilaabo Oktoobar 1, 2021.
Doorkan, Ojakli wuxuu hoggaamin doonaa dadaallada siyaasadda guud ee Boeing, wuxuu u adeegi doonaa madaxa u ololeeyaha shirkadda caalamiga ah, wuxuuna kormeeri doonaa Boeing Global Engagement, oo ah hay'adda samafalka caalamiga ah ee shirkadda. Wuxuu hoos imaan doonaa Madaxweynaha Boeing iyo agaasimaha guud David Calhoun wuxuuna ka shaqayn doonaa Golaha Fulinta ee shirkadda. Doorkan, Ojakli wuxuu ku guuleystaa Marc Allen, BoeingSarkaalka Istaraatijiyadda Sare, oo si ku -meelgaar ah u ahaa madaxweyne ku -xigeenka fulinta Hawlaha Dawladda tan iyo bishii Juun ee la soo dhaafay.
"Ziad waa fulin la xaqiijiyay oo leh raad aad u wanaagsan oo hogaaminaya siyaasadda guud iyo howlaha xiriirka dowladda ee shirkadaha caalamiga ah," ayuu yiri Calhoun. “Khibradiisa ballaadhan ee ka shaqaysa doorka fulinta ee dawladda iyo waaxda gaarka loo leeyahay ayaa gacan ka geysan doonta ka -qaybgalkayaga daneeyayaashayada markaan sii wadno diiraddayada xagga amniga, tayada iyo hufnaanta, iyo beddelidda shirkadeena mustaqbalka. Waxa kale oo aan rabaa inaan uga mahadceliyo Marc Allen hoggaamintiisa saamaynta leh ee ururkayada Hawlaha Dawladda bilihii la soo dhaafay maadaama ay sii waday horumarinta mudnaanta siyaasadda shirkadeena. ”
Ojakli ayaa ku biira Boeing ka dib markii uu ku guulaystay xirfado kala duwan doorka xiriirka sare ee dawladda caalamka ee baabuurta iyo warshadaha maaliyadda marka lagu daro u adeegidda gudaha Aqalka Cad maamulkii madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bush.
Ugu dambayntii, Ojakli wuxuu ahaa la-taliyaha maareynta iyo madaxweyne-ku-xigeenka sare ee Softbank intii u dhaxaysay 2018-20, halkaas oo uu ka abuuray oo hoggaamiyay hawl-galkii ugu horreeyey ee dawladda maalgashiga ee arrimaha caalamiga ah ee shirkadda oo lagu taageerayo dhammaan arrimaha sharci-dejinta, sharciyeynta iyo siyaasadda ee shirkadda. Kahor inta uusan ku biirin Softbank, Ojakli wuxuu 14 sano ku qaatay Ford Motor Company isagoo ah madaxweyne ku -xigeenka kooxda, halkaas oo uu hogaaminayay koox caalami ah oo xoojisay ujeeddooyinka ganacsi ee aasaasiga ah ee shirkadda iyo is -dhexgalka maamul ee ay la leedahay dowladaha 110 suuqyada adduunka oo dhan. Doorkaas, wuxuu sidoo kale faray Ford gacan -qabadka samafalka ee u heellan taageeridda sababaha adduunka.
Markii hore, Ojakli wuxuu ka shaqayn jiray Aqalka Cad isagoo ahaa Ku-xigeenka Maamulaha Arrimaha Sharci-dejinta ee Madaxweyne George W. Bush laga soo bilaabo 2001-04. Goor sii horreysay, Ojakli wuxuu ahaa Madaxa Shaqaalaha iyo Agaasimaha Siyaasadda Senator Paul Coverdell ee Mareykanka wuxuuna shaqadiisa ka bilaabay xafiiska Senator -ka Dan Coats ee Mareykanka.
Ojakli wuxuu hadda u shaqeeyaa Guddoomiyaha Guddiga Smithsonian's National Zoological Park ee Washington, DC wuxuuna xubin ka yahay guddiga Jackie Robinson Foundation.
Ojakli wuxuu shahaadada koowaad ee jaamacadda Mareykanka ka qaatay Jaamacadda Georgetown.
CDC: Qeexida 'si buuxda loo tallaalay' ayaa laga yaabaa inay u baahato...